Xabiib Axmed Cali Waa Saxafi Waana Cayaryahan+Sawirro. – Radio Muqdisho
Weriyaha Telefeshinka qaranka Soomaaliya ee Xabiib Axmed Cali ayaa ah Mid ka gadisan Weriye yaasha kale ee Cayaaraha Soomaaliya sababtoo ah waxa uu isku darsaday in uu yahay Saxafi iyo isaga oo ah Cayaaryahan dheela Kubada Koleyga.
Sida kaaga muuqata Sawirka Hoos aad ku arki doonto Xabiib waxa uu waraysanayaa Cayaaryahan ka soo Horjeedey markii ay dhamaatay Cayaar dhex martay Kooxaha Heegan iyo Jaamacada Balasma oo uu Xabiib u dheelo.
tan ugu xiisaha badan ayaa noqotay sida sarikan ka muuqata Wariye Xabiib oo Kooxdiisii laga badiyay ayaa markii garsooraha uu soo gabagabeeyay cayaarta bilaabay in uu markarafonka Sntv Qaato wareysiyana ka qaadayay cayaartoyda kooxda Heegan ee la loolameysay,isla daqiiqadii laga adkaaday dereenkoodana wax ka weydiinayay.
Waxaan aaminsanahay in Weriye yaasha Sportigu aad uga duwanyihiin kuwa kale waayo waa dad ku dhex jira hawl nabadeed kana dhex geli og bulshada Saxfayiinta kashaqeeya Siyaasada marka loo eego sidoo kale aqoonta ay u leeyihiin u soo gudbinta Bulashada waxyaabaha dhabta ah ee jira ayaa waxaa keeneysa iyaga oo ah kuwo aad uga warqaba waxa ay Bulashada u gudbinayaan waxayna goor walba tagaan Garoomada lagu csyssro.
“waxaan doonayaa inaan ugu hambalyeeyo Saaxiibkeen Xabiib Axmed Cali shaqada wanaagsan ee uu u hayo bulshada waxaana uu yahay Weriyaha keliya intaan lasocdo ee matalay Xulka qaranka dalkeena isla markaana ah Cayaaryahan aad ugu wanaagsan Kubada Koleyga ugu asluub wanaagsan,iyadoo dhowr jeer XSKK u aqoonsadeen ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa tartamo la qabtay” Sidaasi Waxaa yiri Wariye Ceydiid C.raxmaan Oo Wax ku qora Bogga Qalinkacayaaraha.Com
Madaxda Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Koofur Afrika oo kulan ku yeeshay magaalada Cepe Town